Metro Istanbul Ga-ewe ndị ọrụ ọrụ nkwenye 27 | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMetro Istanbul ga-ewe ndị ọrụ iri abụọ na asaa
14 / 03 / 2020 Ọrụ, General
metro istanbul na-akwụ ndị ọrụ nwere nkwarụ
Metro Istanbul ga-ewe ndị ọrụ nkwarụ 15, ndị injinia nwere nkwarụ 7, ndị ọrụ aka ọrụ nkwarụ na ndị ọrụ ụlọ ọrụ 5 nwere nkwarụ.
N'ime oke nke mgbasa ozi bipụtara, a na-ewere ọnọdụ 3 dị iche iche. Maka ịnwe ndị injinia nwere nkwarụ 5, gụsịrị akwụkwọ na ngalaba injinia, nwee nkwarụ, na ndị agha a na-aga agha achọghị ka ha sonye n'ọrụ agha.
Maka ịde ndị ọrụ ọrụ ọzụzụ 7, ọnọdụ nke ịga ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ụmụ nwoke na ụmụ nwoke agaghị esonye na ọrụ ndị agha.
Ọ dị mkpa ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ nke gụsịrị akwụkwọ na mahadum ma jiri mmemme ụlọ ọrụ kọmpụta nke ọma maka eweghara ndị ọrụ ụlọ ọrụ 5 nwere nkwarụ.
Ndị ọrụ niile ga-ebi na Istanbul.
Oge ngwụcha nke ngwa bụ Eprel 5th. A ga-enweta akwụkwọ anamachọihe site na ọdụ obodo ukwu nke Istanbul. Ndị aga-aga ime ga-enyefe akụkọ gbasara ahụike nkwarụ n’oge ngwa a. Ndi akwukwo ndi anabatara ngwa ha ga-acho ya.
TEİAŞ wee were ndị ọrụ nwere nkwarụ
Obodo amaghi ike na Metrobus Station n'ogige
Ozi nke ationgbọ njem Istanbul Metro Profaịlụ Bakırköy - Beylikdüzü Metro Line…
Ministri nke abledgbọ njem nwere nkwarụ na nsonaazụ mkpụchaghị akwụkwọ
KARDEMİR Electrode batara na Ahịa Wire Rod
Ighalo Obodo Metrobus na Udu gbagburu pasent 10 n'ihi Coronavirus